Smartphone းတစ်လုံးမှာ RAM တကယ် ဘယ်လောက် လိုအပ်လဲ?
ဒီဘက်ခေတ်မှာ Smartphone တစ်လုံးကို ဝယ်ဖို့စဉ်းစားတဲ့အခါ RAM အနည်းအများကို ဦးစားပေးစဉ်းစားတာက မှားတဲ့အချက်လို့တော့ မဆိုနိုင်ဘူး။
သို့ပေမယ့် RAM များမှ ဖုန်းသွက်မယ်၊ ဂိမ်းဆော့လို့ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ Logic အမှားကြီးကို 2020 အထိ စွဲကိုင်ထားသေးတယ်ဆိုရင် Smartphone တွေအပေါ် သင့်အမြင်က အတော်လေးလွဲချော်နေပြီလို့ ဦးဆုံးအကြံပေးချင်ပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ဒီကိစ္စက ဖုန်းဝယ်ဖို့ ကိုယ်တွေဆီ အကြံဉာဏ်လာတောင်းကြတဲ့အခါ အများဆုံးအမေးခံရတဲ့ Topic ဖြစ်နေတာကြောင့်ပါ။
ဆိုတော့ RAM ဆိုတာ ဘာလဲ? မြန်မာလိုဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ရင်တော့ ခဏတာမှတ်ဉာဏ် လို့ ခေါ်တယ်။
နားလည်လွယ်အောင် ဥပမာပေးရင်တော့ ကျောင်းစာအုပ်တွေ ထည့်တဲ့လွယ်အိတ်ကို ရေရှည်မှတ်ဉာဏ် (ROM) အဖြစ်တင်စားရင် RAM ဆိုတာက အဲဒီစာအုပ်တွေ တင်သုံးမယ့် စာကြည့်စားပွဲနဲ့ တူပါလိမ့်မယ်။
ဒီဥပမာနဲ့ဆက်ပြောရင် Application တွေဟာ စာအုပ်နဲ့တူတယ်။ Size ကြီးလေ စားပွဲပေါ် နေရာယူလေပါပဲ။ ဒါဆို Multi-tasking ဆိုတာကတော့ စာကြည့်စားပွဲပေါ် တစ်ချိန်တည်းမှာ တစ်အုပ်ထက်ပိုတဲ့ စာအုပ်တွေကို တင်ပြီးအသုံးပြုတာနဲ့ ဆင်တူပါလိမ့်မယ်။
ဖုန်း Hardware တွေအဆင့်မြင့်လာတာနဲ့အမျှ ဒီ Hardware တွေပေါ်မှာ အသုံးပြုမယ့် Software တွေရဲ့ Size ဟာလည်း တဖြည်းဖြည်းကြီးမားလာကြတယ်။
ပုံမှန် Software တစ်ခုရဲ့ RAM အပေါ်မှာ နေရာယူတဲ့ပမာဏဟာ 300 ကနေ 500 MB အထိရှိနိုင်ပါတယ်။
သိပ်မလေးလောက်ဘူးလို့ ထင်ထားကြတဲ့ Facebook တို့လို Social Media App တွေ၊ Chrome တို့လို Browser တွေဆို ပွတ်ရင်ပွတ်သလောက်၊ Tab တွေဖွင့်ရင်ဖွင့်သလောက် RAM အသုံးပြုမှု ပိုများတတ်ကြတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ Display ပေါ် မြင်လိုက်သမျှ Image တွေ Data တွေကို အလွယ်တကူပြန်ကြည့်နိုင်ဖို့ သိမ်းထားပေးတဲ့ Cache File လေးတွေက Newsfeed, Web Page တွေ ကြည့်တာများလေ တိုးလာလေမို့ပါ။
နောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ အဆော့များကြတဲ့ Mobile Game တွေ။ အဲဒီ Game တွေရဲ့ Storage Size ကြီးရင်ကြီးသလောက် Game ဆော့ချိန်မှာ သူတို့နေရာယူမှုပမာဏက RAM ပေါ်မှာ 1GB နဲ့အထက်ရှိတတ်ကြတယ်။
ဒီလောက်ဆို ခင်များတို့ဖုန်းပေါ်က RAM တွေကို ဘယ်အရာတွေက ဘယ်လောက်ထိ ယူသုံးလဲဆိုတာ အကြမ်းဖျဉ်းသိလောက်ပြီ။ ဆိုတော့ RAM အမျိုးအစားဘက် ဆက်သွားတာပေါ့။
LPDDR နောက်က ဂဏန်းတွေဟာ PC, Laptop သမားတွေအတွက် မစိမ်းလှပေမယ့် Smartphone User တွေအတွက်တော့ အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ ထားတတ်ကြတဲ့ နံပါတ်သက်သက်ပါပဲ။
RAM တွေရဲ့ Generation ပေါ်မူတည်ပြီး App တစ်ခုအဖွင့်အပိတ်၊ App တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြား အပြောင်းအလဲကြာချိန်၊ Battery စားနှုန်း စတာတွေမှာ ပြောင်းလဲမှုတွေရှိနေတတ်တယ်။
2020 မှာတော့ Flagship Smartphone တွေပေါ်မှာ LPDDR5 RAM တွေကို သုံးလာပြီး သူတို့ဖုန်းက ဒါသုံးလို့ ဘယ်လောက်မြန်မယ်ဆိုတာကိုလည်း အသားပေးကြော်ငြာလာကြတယ်။
နောက်တစ်ချက်က အသုံးပြုနိုင်တဲ့ RAM ပမာဏ။ 6GB RAM ပါတယ်ဆိုတဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးမှာ တကယ်သုံးလို့ရတဲ့ RAM ပမာဏဟာ 5.5GB ဝန်းကျင်လောက်ပဲ ရှိတတ်ကြတယ်။
Image: The Genius Review
(Internal, SD Storage တွေနည်းတူ) အဲဒီမှာမှ Smartphone ကို မောင်းနှင်မယ့် OS နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ UI တွေအတွက် မဖြစ်မနေပေးရတဲ့ RAM ပမာဏဟာ2to3GB အထိရှိတတ်ကြတယ်။
(ဒါကလည်း Company တွေရဲ့ သူတို့ UI တွေမှာ Feature တွေ ဘယ်လောက်ထိ ထည့်ပေးလဲအပေါ် မူတည်ပါတယ်။) ဆိုတော့ 6GB RAM ပါတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးမှာ App တွေအသုံးပြုဖို့ ကျန်တဲ့ RAM ပမာဏဟာ2to3GB ဝန်းကျင်ပဲ ကျန်တော့မှာပါ။
Free RAM လို့ ကြားလိုက်ရင် ရုတ်တရက် ကောင်းတဲ့ RAM အလွတ်လို့ထင်နိုင်ပေမယ့် ဖုန်းတစ်လုံး ပုံမှန်အသုံးပြုနေချိန် RAM ပေါ်မှာ Free (Idle) RAM များများကျန်နေခြင်းကို အဲဒီဖုန်းရဲ့ UI Optimization မကောင်းတာ‌လို့ အကြမ်းဖျဉ်း သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့် 100MB ဝန်းကျင်ရှိတတ်ပါတယ်။ နောက်နာမည်တစ်ခုက zRAM ပါ။ ဒီဘက်ခေတ်မှာ သိပ်မကြားရတော့ပေမယ့် RAM ပမာဏနဲတဲ့ဖုန်းတွေမှာ Internal Storage ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို RAM အနေနဲ့ ယူသုံးနိုင်အောင် Modify လုပ်ထားတာပါ။
(RAM များတဲ့ဖုန်းတွေမှာ RAM ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို အသုံးနဲတဲဲ့ Data တွေ သိုလှောင်ရာ zRAM ပုံစံမျိုး သုံးနေကြတုန်းလို့ ယူဆနေကြဆဲပါ)
အပေါ်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ App, Game တစ်ခုစီရဲ့ Size နဲ့ ချိန်ထိုးကြည့်ရင် ပေးထားတဲ့ RAM ပမာဏပေါ်မှာ App ဘယ်နှစ်ခုလောက် တစ်ပြိုင်တည်း အလုပ်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတာ အကြမ်းဖျဉ်းခန့်မှန်းမိလောက်ပြီထင်ရဲ့။
ဆိုတော့ သုံးနိုင်တဲ့ RAM ပမာဏထက် ပိုသုံးမိရင်ရော? အသစ်ဖွင့်မယ့် App or Game အတွက် RAM မလုံလောက်တော့တဲ့အခါ ဖုန်းရဲ့ OS က ဖွင့်ပြီးသား App တွေထဲကနေ ဖွင့်ထားတာကြာပြီး အသုံးနဲလောက်မယ်ယူဆတဲ့ App တစ်ချို့ကို ပိတ်ပစ်ခြင်းအားဖြင့် နေရာလွတ်ကို ရှာပါတော့တယ်။
ဒါကြောင့်လည်း သုံးလက်စ တစ်ချို့ App တွေကို အချိန်တစ်ခုကြာလို့ ပြန်ဖွင့်တဲ့အခါ သုံးလက်စနေရာမှာ ရှိမနေတော့ပဲ အစကနေ ပြန်ပွင့်တာမျိုး ကြုံကြရတာပါ။
တစ်ချို့ Company တွေက သူတို့ဖုန်းတွေမှာ Battery စားနှုန်းကို သက်သာအောင် Battery စားနှုန်းများတယ်လို့ ယူဆတဲ့ App တွေကို RAM ပေါ်မှာ ကြာကြာမထားပဲ ပိတ်ပစ်ဖို့ OS ကတစ်ဆင့် စေခိုင်းထားတတ်ကြတယ်။
Image: Kpga Tech
အဲလို RAM ပေါ်မှာ App တွေကို ဘယ်လောက်ထိ လွတ်လွပ်လပ်လပ် အလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးသလဲဆိုတာကို Reviewer တွေ၊ User တွေက ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ RAM Management ကောင်း၊ မကောင်းဆိုတဲ့ User Experience တစ်ခုအဖြစ် ဆုံးဖြတ်ကြပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း နောက်ပိုင်း Smartphone တွေမှာ RAM Management ကို ကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်အောင် Company တွေဘက်က RAM ပမာဏကို များနိုင်သမျှ များအောင် သုံးလာကြတာပါ။
RAM Management ကောင်းတယ်ချီးကျူးခံရတဲ့ OnePlus ဖုန်းတွေမှာ OnePlus3Model က စပြီး 8GB RAM ကို စပြီးသုံးပေးခဲ့တာကြည့်ရင် Multi-tasking သမားတွေအတွက် RAM များခြင်းက ဘယ်လောက်အရေးပါတယ်ဆိုတာ သိကြလောက်ပြီထင်ပါတယ်။
How much smartphone actually needs?
ဒါဆို ဘာလို့များ ခေါင်းစဉ်မှာ RAM များများလိုချင်တဲ့သူတွေကို အတွေးချော်တယ်ပြောခဲ့သလဲလို့ မေးစရာရှိလာပြီ။ ပြောချင်တဲ့ဆိုလိုရင်းက ခုမှစမှာပါ။
ကျွန်တော်တို့ဟာ ဖုန်းတွေမှာ App များများကို မထစ်မပြုပဲ ပြိုင်တူသုံးနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ RAM များများကို တောင့်တကြတယ်။
ဒါပေမယ့် သေချာစဉ်းစားကြည့်ရင် ဒါဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ လိုအပ်မှုထက် လိုချင်မှုနဲ့ ပိုပြီးသက်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ်တိုင်အတွေ့အကြုံအရ 6GB RAM ဟာ Facebook, Messenger, Youtube, Chrome အပါအဝင် Normal App ဆယ်ခုစာလောက်ကို ကောင်းကောင်း Handle လုပ်နိုင်တာ သတိထားမိတယ်။
ဆိုလိုတာက Social Media Usage အတွက် 6GB ဆိုတဲ့ RAM ပမာဏက ကောင်းကောင်းလုံလောက်တယ်ပေါ့။ ဒါဆို Gaming ပိုင်းကရော?
ဒီနေရာမှာ တစ်ခုမေးချင်တာက ကျွန်တော်တို့ဟာ ဂိမ်း ၃ခုလောက်ကို ပြိုင်တူဖွင့်ရင်း တစ်လှည့်စီ ကစားနေဖို့ တကယ်ရော လိုအပ်ရဲ့လားဆိုတာပါ။
PC Gamer တွေမှာတော့ ဂိမ်းတွေ ၃၊ ၄ ခုကို ပြိုင်တူ Run ရင်း အလှည့်ကျဆော့တဲ့သူရယ်လို့ တကယ်မမြင်ဖူးသေးတာပါ။
တကယ်လို့ ဂိမ်းအမျိုးမျိုးလှည့်ဆော့နေရင်တောင် တစ်ခုဆော့ပြီးရပ်တော့မှ နောက်တစ်ခုကိုထပ်ဆော့တာက ကိုယ့်ဖုန်း Battery ကိုရော SoC ကိုပါ အများကြီး ညှာရာရောက်တယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။ Productivity App တွေမှာလည်း ထိုနည်းတူပါပဲ။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်အမြင်မှာတော့ PC, Laptop တွေလောက် ခိုင်းစရာ (ဥပမာ Heavy Video Editing, Triple A Title Game လိုမျိုး) Heavy မရှိသေးတဲ့ Smartphone တွေအတွက် RAM တွေအများကြီးလိုတယ်ဆိုတဲ့ ယူဆချက်ဟာ လက်မခံနိုင်စရာပါ။
Software, Hardware တွေ သိပ်မတိုးတက်သေးတဲ့တစ်ချိန်တုန်းက RAM နည်းပါးမှုဆိုတာ Smartphone တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကို နှေးကွေးစေတယ်ဆိုတာ အတိုင်းအတာတစ်ခုမှန်ခဲ့နိုင်တယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီဘက်ခေတ်အခြေအနေမှာ ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ ရေရှည်သွက်လက်မှုဟာ SoC, Storage, Battery တို့လို တခြား Hardware ပိုင်းတွေရယ်၊ ဖုန်းကို ထောက်ပံ့တဲ့ Software ပိုငျးရဲ့ ကောင်းမွန်မှုရယ် စတာတွေပေါ် ပိုပြီး မှီတည်နေပါပြီ။
ရှင်းလက်စနဲ့ တစ်ဆက်တည်း iPhone တွေဟာ ဘာလို့ Android တွေလောက် RAM မသုံးပဲ အဆင်ပြေနေရသလဲဆိုတာ Bonus Tip အဖြစ် အကျဉ်းချုံးပြောသွားပါ့မယ်။
Android OS ဟာ Open Source ဖြစ်လို့ Company အမျိုးမျိုးက Hardware (အထူးသဖြင့် SoC) အမျိုးမျိုးကို သုံးကြတယ်။ ဒီ Hardware တွေပေါ်မှာ OS လည်ပတ်နိုင်ဖို့ Java Virtual Machine ရဲ့ အကူအညီကို ယူကြရတယ်။
အဲလို ကြားခံစနစ်သုံးရတာကြောင့် ကိုယ်ပိုင် Hardware တစ်မျိုးထဲအတွက် OS ဖန်တီးရတဲ့ iOS နဲ့ယှဉ်ရင် Android မှာ RAM အသုံးပြုမှု ပိုများပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က Android App တွေကို လိုသလောက် RAM ပမာဏ စိတ်ကြိုက်သုံးခွင့်ပေးထားတာကြောင့်ပါ။
ဘာနဲ့တူသလဲဆိုရင် ဒကာခံမယ့်သူပါလာလို့ စိတ်ကြိုက် ဂုန်းဆင်းကြတဲ့ ဘော်ဒါတွေနဲ့တူပါတယ်။ App တွေအတွက် လိုသလောက် RAM ကို OS က စီမံပေးရတယ်။ ဒါကြောင့် App အသစ်ဖွင့်ဖို့ RAM နေရာမလောက်တဲ့အခါ အသုံးနဲတဲ့ App အဟောင်းကို Kick ထုတ်တဲ့စနစ်ကို အသုံးပြုရတာပါ။
iOS က App တွေကတော့ American System နဲ့ပါ။ App Developer တွေဘက်ကလည်း ကိုယ်သုံးမယ့် RAM ပမာဏကို နဲနိုင်သမျှနဲအောင် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ တာဝန်ယူရတယ်။
iOS Background Management
ဒါကြောင့်လည်း iOS ပေါ်မှာ Background App တွေဟာ Android မှာလောက် RAM သုံးစွဲမှုမများရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး iOS ပေါ်က Background App Management ဟာ အတော်ကြမ်းတယ်ပြောနိုင်ပါတယ်။
App တစ်ခုဟာ ဖွင့်ရက်နဲ့ Background ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင် သူ့ရဲ့ RAM ပေါ်နေရာယူမှုဟာ သိသိသာသာကို လျော့ကျသွားတယ်။ ကိုယ်တိုင်ယူဆချက်အရတော့ ဒီနည်းဟာ Game တစ်ခုကို ဆော့နေရင်း Save file မှတ်လိုက်တာနဲ့တူနေပါတယ်။
အဲဒီဂိမ်းဟာ ဆက် run နေတာမဟုတ်ပေမယ့် အသုံးလိုလို့ save file ပြန်ဖွင့်ရင် မှတ်ထားတဲ့နေရာက ပြန်စသလိုပေါ့။ ဒါကြောင့်လည်း iOS ရဲ့ Multi-tasking ကို Multi-tasking အစစ်မဟုတ်ဘူးလို့ တစ်ချို့ Geek တွေက ပြောကြတာပါ။
ဒါပေမယ့် App တွေရဲ့ Feature တွေပိုများလာမှု၊ iOS ကိုယ်တိုင်မှာ တိုးတက်လာတဲ့ အသစ်သစ်သော Feature တွေကြောင့် iOS ရဲ့RAM အသုံးပြုမှုပမာဏဟာလည်း အရင်ထက်ပိုများလာစေတယ်ဆိုတာ 4GB နဲ့ 6GB RAM အထိ သုံးလာကြတဲ့ iPhone, iPad Model တွေက သက်သေပြလို့နေပါတယ်။
ဒါကြောင့် ၂၀၂၀ မှာ Android ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ Social Media, Gaming, Internet စတာတွေကို အဆင်ပြေပြေသုံးနိုင်ဖို့ 4GB RAM လောက် အနည်းဆုံးရှိသင့်ပြီး ရေရှည်အဆင်ပြေဖို့ဆိုရင် 6GB ဆိုတဲ့ RAM ပမာဏဟာ ကောင်းကောင်းလုံလောက်တဲ့ အနေအထားလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
Heavy Usage သုံးလေ့ရှိတဲ့သူအတွက်ဆိုရင်တော့ 8GB RAM ကို ရွေးချယ်ပါ။ ဒီထက်ပိုတဲ့ RAM ပမာဏကိုတော့ Android Phone တစ်လုံးပေါ်မှာ အသုံးမလိုတဲ့ အပို Marketing Terms အဖြစ်ပဲ သတ်မှတ်ချင်ပါတယ်။
Tech နယ်ပယ်က Smartphone တွေအတွက် Speed Test G ဖန်တီးသူ Gary Sims ရဲ့ စကားကို ယူသုံးရရင် “Windows ပေါ်မှာ 8GB ဆိုတဲ့ ပမာဏနဲ့ တော်ရုံ Multitasking ကို ကောင်းကောင်းလုပ်နေနိုင်သေးရင် Smartphone တွေပေါ်မှာလည်း 8GB RAM ဆိုတာ မလောက်ငစရာမရှိပါဘူး” ဆိုတဲ့စကားနဲ့ပဲ ဒီ Article ကို အဆုံးသတ်ပါရစေ။
OWN Article created by Xyon
ကွန်ပျူတာမှာ သုံးနေတဲ့ Hard Disk တွေ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ?
PC နဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေမှာ Display ပိုင်းက Performance ထက် ပိုအရေးကြီးတာလဲ Part 1
PC နဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေမှာ Display ပိုင်းက Performance ထက် ပိုအရေးကြီးတာလဲ Part 2
ကျွန်တော်နဲ့ဖြေရှင်းမရတဲ့ ဘက်ထရီ ပုစ္ဆာ
Lenovo Legion Duel ဂိမ်းမင်းဖုန်းမှာ ပါဝင်လာတဲ့ အားသာချက်များ